PowerPoint Qalabka Dayactirka. PowerPoint Soo kabashada Software. Dayactir Faylasha PPTX.
DataNumen PowerPoint Recovery waa ugu fiican PowerPoint qalabka dayactirka adduunka. Waxay dayactiri kartaa musuqmaasuq PowerPoint Faylasha PPTX iyo soo kabashada inta ugu badan ee xogtaada ah ee suurtogalka ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
maxaad DataNumen PowerPoint Recovery?
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen PowerPoint Recovery v1.9
Taageer Microsoft PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 iyo PowerPoint oo loogu talagalay faylasha Office 365 pptx.
Taageero si loo soo cesho sayidyadihii isdaba-joogga ahaa, qaababkii, is-beddelashada, qoraalladii masters-ka, qoraalladii, masters-ka gacanta iyo mawduucyada
Taageero inuu ka soo kabto dhammaan noocyada warbaahinta, oo ay ku jiraan sawirrada, moodooyinka 3D, fiidiyowyada iyo cajaladaha.
Taageero lagu dayactirayo PowerPoint faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah PowerPoint files.
Taageero si loo helo oo loo xusho PowerPoint faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waad dayactiri kartaa a PowerPoint ku fayl garee liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen PowerPoint Recovery inuu ka soo kabsado Faylasha PPTX kharribmay
Marka aad PowerPoint Faylasha PPTX waa kuwo khariban ama waxyeeloobay oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen PowerPoint Recovery si loo baaro feylasha PPTX oo looga soo kabsado xogta intii suuragal ah.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aanad ka soo kaban wixii faylal musuqmaasuq ama waxyeeloobay PPTX leh DataNumen PowerPoint Recovery, fadlan xir barnaamij kasta oo kale oo wax ka beddeli kara faylasha PPTX.
Xulo faylka PPTX ee kharribmay ama waxyeelleeyay si loo soo kabsado:
Waxaad si toos ah ugu soo dari kartaa magaca faylka PPTX ama guji kan badhanka si aad u caleenta u xulato feylka. Waxa kale oo aad riixi kartaa badhanka si aad u hesho feylka PPTX si loogu soo celiyo kombuyuutarka maxalliga ah.
Marka la eego, DataNumen PowerPoint Recovery wuxuu kaydin doonaa feylka PPTX ee la soo helay fayl cusub oo magaciisu yahay xxxx_fixed.PPTX, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha faylka PPTX. Tusaale ahaan, ilaha PPTX feylka Damaged.PPTX, magaca asalka ah ee feylka la soo helay waa Damaged_fixed.PPTX. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Xulo Magaca Faylka Go'an
Waxaad si toos ah ugu dari kartaa magaca faylka la soo kabsaday ama guji badhanka si ay u caleenta iyo xulo faylka soo kabsaday.
Click ah batoonka, iyo DataNumen PowerPoint Recovery doonaa start iskaanka iyo dib u soo kabashada ilaha PPTX.
Kadib nidaamka dib u soo kabashada, haddii faylka isha PPTX si guul leh loogu soo kaban karo, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad furi kartaa feylka PPTX ee soo kabsaday ee Microsoft PowerPoint.
DataNumen PowerPoint Recovery 1.4 waxaa la sii daayay Diseembar 14, 2020
DataNumen PowerPoint Recovery 1.2 waxaa la sii daayay Nofeembar 3deeda, 2020
DataNumen PowerPoint Recovery 1.1 waxaa la sii daayay Oktoobar 29th, 2019
DataNumen PowerPoint Recovery 1.0 waxaa la sii daayay Janaayo 18th, 2019
Taageer Microsoft PowerPoint 2007 ilaa 2019 iyo PowerPoint oo loogu talagalay faylasha Office 365 pptx.
Dayactir oo soo cesho faylasha Microsoft Excel xls, xlw iyo xlsx ee musuqmaasuqa ama waxyeeleeyay.